6 makiyi ayo musika wekutengesa unozotsamira pakupera kwegore | Ehupfumi Zvemari
Pakati pemazuva iyo index inosarudzika yemusika weSpanish wemusika wakadzikira nehumwe simba, zvinosuwisa kune vazhinji nevazhinji vatyairi vakaisa mari yavo. Tichitarisa kumwedzi mitatu yekupedzisira yegore, maonero acho haana tariro. Iko imwe yezvinangwa zvayo zvikuru ichave yekutsungirira yakakosha nhanho ye 9.000 points. Nekuti kana izvi zvikasaitika, iyo yekuderera inovimbiswa kune rinotevera gore. Kusvika padanho rekota yekupedzisira yegore inozonyanya kukosha kupfuura mumakore apfuura.
Uye zvakare, kunzwa kweiyo vatengesi ari pane imwe yenzvimbo dzakaderera mumakore achangopfuura uye maonero ake ndeyekuti misika yequity ichaenderera ichidzika kusvika pakupera kwegore. Hazvishamise kuti iwo mapfupi nzvimbo ari kumisikidzwa nekristaro yakajeka kujekesa kune vatengi uye nevhoriyamu yakaderera yezvibvumirano. Nekuti iyo nhau irikugadzirwa mumisika yezvemari haisi yekufarirwa nevamiriri vemari vakasiyana.
Kukubatsira iwe kuisa mari yako mumwedzi ino inoita kunge yakaoma kwazvo kwatiri kushanda pamusika wemasheya, hapana chinhu chiri nani pane kuburitsa zvaunokanganisa. Asi pamusoro pezvose kunyora izvo chokwadi chichava chakanyanya kukosha mukushanduka kwemisika yenyika yekutengesa. Zvichienderana navo, hauzove nesarudzo kunze kwekushandisa imwe kana imwe nzira kuita kuti capital yako ibatsire kubva ikozvino. Ivo havangori chete kubva kune chete hupfumi bhora, asi zvakare kubva kune a maonero ezvematongerwo enyika uye kunyangwe magariro.
1 Kupera kwegore: kuwedzera mukufarira
2 Kukura kuderera
3 Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika
4 Kugadzirisa kwakanyanya
5 Kuwedzeredza muchikwereti chenyika
6 Inogona kuitika dambudziko rezvehupfumi
Kupera kwegore: kuwedzera mukufarira
Ehezve, iyo yakaziviswa kukwira kwezvibereko muyuro zone haifarire kudzikamiswa kweSpanish equities. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei chakadzikira mumwedzi ichangopfuura uye kunyanya kubva muzhizha rapfuura iri. Kune mashoma kwazvo masheya emitengo anoramba akanaka mune ino nguva uye mune chero zviyero kuburikidza nezvisungo zvisingauye kubva kuIbex 35, asi kubva kune yechipiri indices. Kuburikidza nemakambani ane mashandiro anoitirwa iyo fungidziro yekudyara pamusoro pezvimwe zvekufunga zvehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero.
Vamwe vaongorori vezvemari vanotenda kuti mune yakajairwa mamiriro ehuwandu hwehuwandu, iyo inosarudzika index inogona kuve pazasi pezviuru zvisere nemazana mashanu. Chiitiko chingakutungamira kuti urasikirwe nemari yakawanda kana iwe uri mukutenga zvinzvimbo. Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chechokwadi uye icho ndechekuti mumwedzi iyi kusvika kupera kwegore rino uchave nemukana wekutengesa pamitengo yemakwikwi. Uye chimwe chezvinhu izvi chinouya kubva mukubviswa kwesimba nevakuru vemari mukondinendi yekare.
Imwe yedata yaari kupa kune vanoita mari kudzikisira mukufungidzira kwekukura kwehupfumi. Kwete kwete pamwero wenyika chete asiwo kunze kwemiganhu yedu. Kunze kwega kwega kwe United States uye uyo musika wemasheya unoramba uchikwira kumusoro, pazvirekodhi zvakakwira Pamwe mhinduro yekugadzirisa dambudziko iri mukudyara iri mukushandura musika wezvemari uye zvakanyanya kuenda kune rimwe divi reAtlantic. Ichave iri nzira ine hunyanzvi yekudzivirira yako mari mumwedzi yekupedzisira yasara yegore.
Kune rimwe divi, kune zvakare njodzi yakakomba yekuti dambudziko rezvehupfumi rinogona kuburitswa, kunyangwe pasina dudziro yehukuru hwayo. Chinhu icho mune imwe nzira kana imwe chiri kudzikiswa kubva pamutengo wemasheya. Nekuti sekuziva kwako iwe, misika yezvemari inotarisira chokwadi cheupfumi chenyika kana nzvimbo yenzvimbo. Uye neiyi pfungwa, zvakafanotaurwa zviri kunyanyisa zvisina kunaka. Mushure mekunge Ibex 35 yaive yakareba nekukwira kuenderera. Ichi ndicho chimwe chinhu chinogona kuyera musika weSpanish wemusika mumatatu ekupedzisira egore. Zvirinani iwe unofanirwa kufungisisa izvi zvisina kunaka mamiriro nevashambadzi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari inotamba.
Kusagadzikana kwezvematongerwo enyika
Mamiriro ezvematongerwo enyika mune dzimwe nyika dze European Union Icho zvakare chiitiko chengozi kuitira kuti misika yemasheya isasimuke mune rasara regore. Hazvishamisi, hazvisi kutongwa kunze kuti dambudziko rakakomba rinogona kugadzirwa mukati meyuro zone uye kuti zvinogona kukuvadza zvido zvemusika wemasheya. Icho chinhu chiri kutengesawo mazuva ano uye pesvedzero yeItari iri kuve yakakosha kwazvo kune huyero munyika medu. Kufungisisa zvakadzama mukurasikirwa uye kuve imwe yemastock exchanges ekare kondinendi inonyanya kukanganiswa nemamiriro aya.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti uri kuzorarama maitiro esarudzo yakakosha uye inogona kuona shanduko yemisika yeEuropean equity. Pamusoro pezvimwe kufunga, kusanganisira mhedzisiro yebhizinesi yemakambani akanyorwa pamusika unoramba uripo. Panyaya iyi, zvakakosha kuti iwe uzive kuti sarudzo dzichaitwa mumwedzi inotevera ichave yakakosha kwazvo kune ramangwana remasangano enharaunda. Uye izvo pasina kupokana zvinogona kuve chinokonzera kumwe kudonha mumisika yemari.
Ehezve, hazvisi izvo zvakakosha kuti misika yemasheya yakave neyakawandisa mukukwira kwemakore apfuura. Iko pasina sarudzo asi debug kutengesa kumanikidza kugadzirisa mutemo wekugovera uye kudiwa zvakare mune izvi zvemari zvinhu. Hazvishamise kuti mimwe misika yemasheya yakayemurwa neinopfuura 50% uye izvi zvakawandisa zvinofanirwa kugadziriswa mune ese ehupfumi nemamiriro ezvinhu emari. Nekuti pane chirevo pamusika wemasheya chinoti "hapana chinokwira nekusingaperi" sezvakaratidzwa mumitambo yapfuura.
Mubvunzo mukuru ndewokuti kuregererwa kupi kunoonekwa kuchasvika kure mumisika yemari. Nekuti hapana mubvunzo kuti chikamu chakanaka chemipiro yemari inoitwa nemhando dzese dzevatengesi chiri munjodzi. Kusvika pakuti iwe parizvino urikuona kutsauka kwemari kune dzimwe nhumbi dzemari. Kwete chete kubva kune yakagadziriswa mari asiwo kubva kune dzimwe nzira dzekudyara. Chinhu chaive chisati chaonekwa kwemakore mazhinji. Sechiratidzo chekuti chimwe chinhu chinogona kuitika panguva isingatarisirwi, sezvakaitika nedambudziko rezvehupfumi ra2007 na2008. Mairi iri yambiro kune vafambisi vengarava kuti vagadzirise mari yavo zvirinani kubva zvino zvichienda mberi.
Kuwedzeredza muchikwereti chenyika
Chimwe chinhu chinotsanangura kushanda kwakaipisisa kwemusika wemasheya mumwedzi mishoma yasara yegore inomiririrwa nenyaya yekuti chikwereti chikuru chavanounganidzaKwete makambani anotengeswa pachena, asi kunyanya anoti. Muenzaniso wakanaka weichi chiitiko chinonetsa unomiririrwa neSpain. Nematanho echikwereti ari padyo ne100% uye neaya akaomesesa pamusika wemasheya kuti usimuke kana kugadzikana mumitengo yemitengo yawo.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganikwa panguva ino chaiyo yekuti hupfumi hweSpain hwave nepamusoro chikwereti mumhuri dzeSpain. Kusvika padanho rekuti kiredhiti ratora mune mamwe mabasa akajairika, akadai sekutenga kwevatengi, zvinodiwa nemhuri kana matambudziko ekuita raramo. Ndokureva, hurongwa hwese hwakaomarara husingazopa mapapiro kumari kuti ivandudze mitengo yemwedzi yapfuura uye iyo inogona kutsanangura mamiriro ayo yaanopa panguva ino, kune kunetseka kwevazhinji vashandisi mune zvemari kana zvigadzirwa zvekudyara. .
Inogona kuitika dambudziko rezvehupfumi
Seyekupedzisira mamiriro ekurangarira mumwedzi yekupedzisira yegore inyaya yekuti haina kutonga chero kushaya mari. Izvi zvinoziviswa nevamwe vevanoshanda zvakanyanya ehupfumi, kwete nyika chete asiwo nepasi rose. Iko kune zvimwe zvakawanda zvaunogona kurasikirwa mumusika wemasheya pane kuhwina. Kwete pasina chinangwa chako chikuru mukudyara kubva zvino zvichienda mberi ndechekuchengetedza yako mari kupfuura zvimwe zvekufunga. Semuenzaniso, iyo purofiti iwe yaunogona kuwana kuburikidza nemari zvigadzirwa uye kunyanya muzvakabva pamusika wemusika.
Chero zvazvingaitika, iri mamiriro ezvinhu ari mukati meanotarisirwa uye ayo asina chokwadi angakanganisa misika yemari. Neichi chikonzero chega iwe unofanirwa kuve wakangwarira kupfuura nakare nekupa sarudzo kune zvigadzirwa zvinogadzira yakamisikidzwa uye yakavimbiswa kudzoka gore rega uye zvisinei nekuti kuita uku kungave kudiki zvakadii. Hazvishamisi kuti uri kuzviratidzira panjodzi dzakanyanya mune dzese mari dzekudyara Mupfungwa iyi, haufanire kuyedza mhanza yako nekuti mhedzisiro yayo inogona kukuvadza munzira dzese. Sevamwe vevanonyanya kukosha vezvehupfumi vari kuyambira mazuva ano. Zvino zvichave zvakafanira kuongorora kana zvichizadzikiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 makiyi ayo musika wekutengesa unozotsamira pakupera kwegore
Shamwari, ini ndinokurudzira zvikuru kambani Sin Impuestos. Iyo yakanakisa uye yakakumikidzwa mukupa masevhisi masevhisi anotibvumidza isu kuchengetedza zvivakwa zvedu, kuita mari, kusimudzira bhizinesi renyika dzese, pakati pevamwe. Zvave zvakanaka kwazvo kwandiri!